Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site Nexus S, Galaxy Nexus
> Resource> Samsung> Olee naghachi ehichapụ faịlụ site Nexus S, Galaxy Nexus
ENYEMAKA! M na mberede ehichapụ faịlụ na Galaxy Nexus :(
M mkpa naghachi photos na Samsung Galaxy Nexus 4gLTE! Na m nwere Verizon Galaxy Nexus version nke ekwentị. M na-agụ online na faịlụ na-adịghị na-adịgide adịgide ehichapụ ruo mgbe ha mkpa na-elekọta dere na ike ga-gbakee. Bụ n'ebe ihe ọ bụla m nwere ike ime?
Ee, ị na nri. Faịlụ na ị ehichapụ na-adịghị na-adịgide adịgide-arahụ ruo mgbe ha na-overwritten site ọhụrụ faịlụ. I nwere ike igosi Samsung Galaxy Nexus data mgbake na kọmputa gị. Ịkpachara anya: ọ bụla na-ezighị ezi na ime ihe nwere ike ime ka gị aga na photos furu efu ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi ya, ọ bụ nnọọ mkpa iji a pụrụ ịdabere na mgbake ngwá ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị ihe ọ bụla echiche otú ime ya, m nwetara abụọ Aro: Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery). Ọ bụ a pụrụ ịtụkwasị obi na-akwado ndị mgbake nke kọntaktị, ozi, foto na vidiyo na mberede ehichapụ on Samsung Galaxy Nexus. E wezụga Galaxy Nexus na Nexus S, Ọ bụ na-dị ka ndị ọzọ Samsung ngwaọrụ, dị ka Galaxy S, Infues, wdg
Gbalịa free ikpe mbipute a Galaxy Nexus data mgbake software ugbu a.
Rịba ama: Ị nwere ike ele akwado Android ngwaọrụ ebe a tupu ị na-eme mgbake.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ na ngwaọrụ gị ma mee ka USB debugging na ya
Nke mbụ niile, jikọọ ekwentị gị na kọmputa site na a dijitalụ USB. Mgbe ahụ malite usoro ihe omume, ị ga-enweta isi window dị ka ndị a.
Ọ bụrụ na ekwentị gị nwere ike gaghị achọpụtara na usoro si window-egosi dị ka n'okpuru. Mkpa ka ị nwee USB debugging na ya. E nwere ụzọ atọ ka ngwaọrụ-agba ọsọ na dị iche iche Android OS nsụgharị. Họrọ onye maka ngwaọrụ gị na-eso ya na-enyere USB debugging.
Nzọụkwụ 2. Malite ike iṅomi gị Galaxy Nexus furu efu data
Mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịmalite iṅomi ekwentị gị furu efu ozi, kọntaktị, foto na video. Pịa "Malite" na-amalite.
Mgbe ihe omume ahụ okokụre ngwaọrụ analysis, ọ bụ oge ka iṅomi ekwentị gị ugbu a. Ka ọ dịgodị, a "Kwe Ka" button ga-gbapụta na ekwentị gị na ihuenyo. Mkpa ka ị pịa "Kwe Ka" na-ekwe na-esote edinam, nke mere na usoro ihe omume pụrụ ịnọgide na-ike iṅomi ekwentị gị ehichapụ data na ya.
Nzọụkwụ 3. Preview na-agbake ozi, kọntaktị, foto na video si Samsung Galaxy Nexus
Mgbe Doppler (ọ ga-ewe gị nnọọ ogologo oge), ị ga-enweta a mgbake akụkọ dị ka ndị a. Ebe i nwere ike ego niile recoverable data gụnyere SMS, na kọntaktị na photos. Videos-apụghị previewed tupu mgbake. Akara ndị ị chọrọ na pịa "Naghachi" iji nweta ha azụ na otu Pịa.
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na gị Nexus S / Galaxy Nexus ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa hà. Ọ bụrụ na ị chọrọ mbubata kọntaktị gị, foto na video azụ ngwaọrụ gị, i nwere ike iji Wondershare MobileGo for Android, nke na-ahapụ gị jikwaa ọdịnaya na gị android ngwaọrụ effortlessly, gụnyere ozi, kọntaktị, photos, videos, ngwa ọdịnala, wdg
Ị nwere ike naghachi data si Samsung Galaxy Nexus ugbu a. Download free ikpe mbipute a Galaxy Nexus foto mgbake software n'okpuru nwere a-agbalị.
Olee otú iji weghachite ehichapụ Pictures si Blackberry usoro 8530/9360/9330
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si Motorola Xoom
Olee otú Naghachi ehichapụ Pictures si Photon 4G
Nyefee faịlụ site Samsung ka PC Iji Kies site WiFi
Samsung Iweghachite Ngwọta, A Samsung Software Ị Chọrọ Wepụ
4 Ihe Ndị Ị Maara banyere MP4 na Samsung
3 Ụzọ nyefee Ndi ana-akpo Site na otu Samsung na ngwaọrụ ọzọ
Olee otú iji tọghata YouTube FLV ka Galaxy S4